कृषि सामग्रीमा अनुदान – News of Nepal
सिजा दर्पण मासिक
कृषि सामग्रीमा अनुदान
२७ चैत्र २०७५, बुधबार ११:१३ sudarshan
बागलुङ, २७ चैत । गलकोट नगरपालिकाले किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामग्री प्रदान गरेको छ । व्यावसायिक कृषि गर्ने किसानलाई प्लाष्टिक घर (टनेल), मौरीघार र बिउ राख्ने भकारी अनुदानमा वितरण गरेको हो ।
नगरभित्रका ११ वटै वडामा गरी २३६ किसानलाई प्लाष्टिक घर (टनेल) प्रदान गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । वडा नं १ मा ३८, २ मा २२, ३ मा ३५, ४ मा १०, ५ मा २२, ६ मा १५, ७ मा ३३, ८ मा १७, ९ मा ९, १० मा १५ र ११ मा २५ किसानले प्लाष्टिक घर (टनेल) पाएका छन् ।
कूल रु चार हजार ८०० मूल्यको ‘टनेल’ किसानलाई रु दुई हजार ४०० मा उपलब्ध गराइएको नगरप्रमुख भरत शर्मा गैरेले बताउनुभयो । वडाबाट आएका माग र सिफारिशका आधारमा किसानलाई अनुदान दिइएको हो ।
अन्नबालीको बीउ राख्न चाहिने भकारीमा ४७ किसानले अनुदान पाएका छन् । वडा नं १, ५ र ६ मा पाँच–पाँच, वडा नं २, ३, ४, ७, ८, ९, १० र ११ का चार–चार किसानले भकारीमा अनुदान पाएका हुन् । रु १३ हजार मूल्य पर्ने भकारी किसानले रु छ हजार ५०० मा पाएका छन् । यस्तै नगरभित्रका १२५ किसानले मौरीघारमा अनुदान पाएका छन् । रु तीन ४५० पर्ने घार किसानलाई रु एक ७२५ मा उपलब्ध गराइएको हो ।
नगरपालिकाको कृषि तथा पशु सेवा शाखाका अनुसार झण्डै रु २० लाखको कृषि सामग्री ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई वितरण गरिएको हो ।
“कृषिको व्यावसायिकरणमा हाम्रो जोड छ” नगरप्रमुख गैरेले भन्नुभयो, “कृषि र पशुपालनमा लगानी र अनुदान अझ बढ्छ ।” कृषिको अनुदान दुरुपयोग हुने र प्रतिफल नआउने प्रवृत्ति रोक्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । (रासस)
Previous तीर्थयात्री चढेको भ्यान दुर्घटना हुँदा ११ घाइते
Next कामपाको संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण
३० चैत्र २०७५, शनिबार ०९:४० sudarshan
२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १५:५७ sudarshan
हेटौँडामा बर्डफ्लु नियन्त्रणको प्रयास
ओली-दाहाल चन्द्रागिरि बास : वैशाख ९ गतेसम्म एकता टुंग्याउने समझदारी
३० चैत्र २०७५, शनिबार ११:१९ sudarshan
आखिर चैते दशैं किन मनाइन्छ र यसको इतिहास के हो ?
आक्रामक अभियान थाल्दै नेकपा
२६ पुष २०७५, बिहीबार ०९:२४ sudarshan
बुबाको स्मृतिमा बालबालिकालाई स्विटर र झोला वितरण
रणमैदानमा मुटु टुक्रिँदाको क्षण
स्टार स्टडी इन्स्टिच्युट एन्ड मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभाग दर्ता नं ११९२/०७५–०७६
ठेगाना : –घट्टेकुलो, काठमाडौँ
सम्पर्क : ९८४३४१३१३८
Copyright © All rights reserved @ biplavi.com